सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको कुल आयमा कति भयो वृद्धि ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको कुल आयमा कति भयो वृद्धि ?
on: May 23, 2019 लगानी
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ ले चैत मसान्तको तुलनामा वैशाख मसान्तमा कुल आय १४० प्रतिशतले बढेको छ । चैत मसान्तमा रू. ४ करोड ६० लाख कुल आय गरेको योजनाले वैशाख मसान्तमा रू. ११ करोड कुल आय गरेको छ ।
योजनाले चैत मसान्तको तुलनामा वैशाख मसान्तमा जम्मा आय १७६ प्रतिशतले बढाएपछि कुल आय बढेको हो । चैत मसान्तमा रू. ४ करोड ५३ लाख गरेको आय वैशाख मसान्तमा रू. १२ करोड गरेको छ । योजनाले लाभांशबाट पाएको आम्दानी भन्दा पाउन बाँकी आम्दानी बढी भएकाले कुल आय बढेको हो । योजनाले वैशाख मसान्तमा लाभांशबाट रू. ४ करोड ३३ लाख पाएको छ भने रू. ८ करोड २१ लाख पाउन बाँकी रहेको छ ।
योजनाले वैशाख मसान्तमा बैंक मौज्दातमा रू. १३ करोड ९१ लाख राखेको छ । योजनाले सूचिकृत शेयरमा रू. ६७ करोड ५० लाख लगानी गरेको छ । सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्रमा रू. १ करोड ३० लाख रहेको छ । योजनाले बैंक मौज्दातमा रू. ८ करोड रहेको छ ।
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ को सूचिकृत शेयरमा ६७ करोड लगानी
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ ले बढायो धितोपत्रमा लगानी
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ को नाफा ५९% बढी
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ को नाफा १५ लाख